अभिमत: झाडापखाला फैलँदा जापानी झसंग –
झाडापखाला फैलँदा जापानी झसंग –
लामो जापान बसाइपछि म नेपाल आएको आज करिब चार महिना बितिसकेको छ। यसबीच एनेकपा माओवादीको विदेश कमाण्डअन्तर्गत जोडिएर जापानमा संगठन विस्तारको काम गरेँ। हाम्रो पार्टीलाई अमेरिकाले अहिले पनि आतंककारीको सूचीबाट हटाएको छैन। अमेरिकी दृष्टिमा कथित आतंककारी मानिएको हाम्रो पार्टी जापानी सरकारको दृष्टिमा लोकतन्त्रवादी हुने कुरै थिएन। हामीले बनाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा जापानको संस्थापक अध्यक्ष भएर संगठन विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा संगठनको प्रथम अधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। उक्त अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपालबाट डा. बाबुराम भट्टराईलाई लैजाने निर्णय गरियो। त्यसका लागि संगठनको निर्णयबमोजिम मैले पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईसँग आफैँ फोनमा कुरा गरेर टुंगो लगाएँ। सोहीअनुरूप भट्टराईका निम्ति भिसाका लागि आवश्यक कागजपत्र पठाएँ। भर्खरै शान्तिवार्तामा आएको कारण उहाँको सुरक्षाको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर उहाँलाई नबोलाउँदा राम्रो हुने निर्णयसहित सम्मेलन स्थगित गरियो। सम्मेलन सरिसकेपछि अगाडिको कार्यक्रम पुनः वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख क. गौरवसँग सल्लाह गरी स्वयं क. गौरवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्मेलन गर्ने निर्णय भयो।
सोहीअनुरूप क. गौरवलाई भिसाका लागि कागजपत्र पठाउने काम गरियो। तर, जापानिज एम्बेसीले विविध कारण देखाएर भिसा दिन अस्वीकार गर्यो , जसले गर्दा पुनः सम्मेलन स्थगित हुन गयो। यसपछि नेपालबाट कसैलाई पनि जापान बोलाउन नसकिनेरहेछ भन्ने टुंगोमा पुग्यौँ। पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिई प्राप्त सफलताका आधारमा जापानीहरूले हामी र हाम्रो पार्टीप्रति केही नरम दृष्टिकोण अपनाउन थालेको संकेत पाइन थाल्यो। निर्वाचन परिणामपछि हाम्रो संगठनप्रति जापान सरकारको मात्र होइन, जापानमा विभिन्न व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीको दृष्टिकोणमा समेत काफी परिवर्तन आयो र नेपालीहरूबीच संगठन विस्तार पनि राम्रो हुँदै गयो। यसैक्रममा हामीले पुनः वरिष्ठ नेता बोलाई उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा प्रथम अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यौँा। क. गौरवसँग फोनमार्फत सल्लाह मिलाई अधिवेशनको तयारीमा जुट्यौँ। जापानी दूतावासमा डकुमेन्ट बुझाउने र टिकटको तयारी गर्ने जिम्मा मेरो भाइ इन्द्र केसीलाई दिइयो। भिसाका लागि जापानी राजदूतले स्वयं क. गौरवलाई नै बोलाएर छलफल गरेछन्।
उहाँले जापान जानुको उद्देश्यबारे राजदूतसँग कुरा गर्नुभएछ र भिसा लिनुभएछ। भिसा मिलेको कुरा फोनमार्फत थाहा भएपछि हाम्रो खुसीको सीमा रहेन। अधिवेशन राजधानी टोकियोमा सम्पन्न भयो। मेरा घनिष्ट जापानिज साथी नागाई नेपाल भ्रमण गरिसकेका व्यक्ति हुन्। एकपटक जापानस्थित बाग्लुङवासीले बाग्लुङ अस्पताललाई भिडियो एक्स–रे मेसिन खरिद गरी उनले हामीलाई चन्दा मात्र दिएनन्, आफैँ बाग्लुङसम्म पनि आएका थिए। उनी करातेका फोर डन हुन्। उनको नेपालमा आएर कराते प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने तयारी गरिरहेका थिए। उनीसँग एकजना मेडिकल डा. साथी पनि आउँदै थिए। उनको त्यो योजनालाई सफल पार्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने योजना बनिरहेको थियो। यही क्रममा उनले नेपालको परिस्थितिबारे इन्टरनेटमार्फत दैनिक जानकारी लिइरहेका थिए। अहिले पश्चिमी जिल्ला जाजरकोट, रुकुम, रोल्पामा देखापरेको झाडापखाला र औषधि नपाएर मान्छेहरू मरिरहेको समाचारले उनमा नेपाल र नेपाल सरकारप्रति अत्यन्त नकारात्मक सोचको विकास हुन गएछ।
जापानमा आगामी २०/२५ दिनपछि गर्मी बिदा सुरु हुँदै छ। त्यही समय नेपाल आउने र कराते प्रशिक्षणबारे सम्पूर्ण तयारी गर्ने सोच बनाएका नागाईले नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द गरेको जानकारी मेलमार्फत गराउँदै हिजो मात्र फोनबाट नेपालबारे विविध प्रश्न गरे। उनले थप प्रश्न हाम्रै पार्टीको बारेमा पनि गर्न थाले। उनी भन्दै थिए, झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र माओवादीको राम्रो प्रभाव भएको ठाउँ हो, त्यहाँ माओवादीले कस्तो गतिविधि गर्दै छ? मैले देशभित्र जे–जस्तो भए पनि उनलाई राम्रै गरी सम्झाउने प्रयास गरेँ। सरकारले पनि सामान्यतः गरेकै छ। तर, सरकार गम्भीर भएको छैन। हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले चन्दा संकलन गरेर पठाएका छन्। राजधानीमा हाम्रो पार्टीको पहलमा रकम उठाएर पठाउने काम भएको छ। यस्तै–यस्तै कुरा गरेर सम्झाउने प्रयत्न गरे। 'यो समस्या अब चाँडै समाधान हुन्छ, डराउनुपर्दैन' भन्दा नेपालका सरकारी अस्पतालमा औषधि केही छैन।
मलाई पनि बिमारी भए के गर्ने यसपालि म आउँदिन भन्दै उनले एकोहोरो अडान लिने काम गरे। मैले यहाँका बारेमा जति सम्झाए पनि उनी नेटमार्फत नेपालको वास्तविकता बुझेर आफैँ मलाई सम्झाउँदै थिए। जापानमा हाम्रो संगठनको दोस्रो अधिवेशन हुँदा वरिष्ठ नेताहरू क. किरण, क. गौरव र क. वर्षमान पुन 'अनन्त' हुनुहुन्थ्यो प्रमुख अतिथि। त्यसवेला उनी कोरिया गएका कारण त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाएर उहाँहरूसँग भेट्ने धोको रहिरहेको रहेछ। वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा जापान गएको वेला पनि उनी आफ्नो व्यस्तताको कारण भेट्न नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। डा. भट्टराईका बारेमा बढी चर्चा सुनेका नागाईले नेपाल आएपछि क. किरण, गौरब, बाबुराम र अनन्त तथा जाइकाको निम्तामा जापान भ्रमण गरेका नेता डा. टोपबहादुर रायमाझीलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाउन मलाई बारम्बार अनुरोध गरेका थिए। मैले उनलाई भेट गराउने वचन पनि दिएको थिएँ। तर, उनले नेपाल आउने कार्यक्रम हाम्रो देशको आन्तरिक अवस्था देखेर रद्द गरेकाले यो सबै योजना पूरा हुन पाएन। (लेखक अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन्।)
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 9:10 AM